Home MPITANDRINA FOOTBOLA Jose Mourinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny mpilalao baolina kitra iray izay malaza amin'ny anarana; 'The Special One'. Ny tantaran-tantaran'i Jose Mourinho momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra anarana dia mitondra ho anao ny fitantarana feno momba ny hetsika mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny analizy dia mirakitra ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny maro amin'ireo zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy. Tsy isalasalana, i José Mourinho dia heverin'ny maro ho mpitantana ny baolina kitra malaza indrindra amin'ny ankapobeny.
Jose Mourinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Ny fahazazana
Jose Mourinho tantara an-tsehatra
José Mário dos Santos Félix Mourinho dia teraka tany Setúbal, Portugal tamin'ny Janoary 26th, 1963 ho an-dRamatoa José Félix Mourinho, izay Mpitety ny Profesora sy reny Maria Júlia Carrajola dos Santos, izay mpampianatra sekoly ambaratonga fototra.
Notezaina tamin'ny fianakaviana iray manan-karena i Jose. Ny renin'i Maria Júlia Carrajola dos Santos, noheverina ho mpandresy ny sakafon'ny fianakaviana. Ny fahatongavan'izy ireo avy amin'ny fianakaviana feno fitiavana feno football dia nosoloina ny fomba fanatsarana an'i Jose sy ny sambon-tongotr'izy ireo amin'ny alàlan'ny antsoina hoe 'asa tena mahafinaritra'. Raha mbola zaza izy, dia azony ny fahafahana rehetra azon'ireo ankizy tsirairay manonofy.
Jose Mourinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Ny jadona sy ny safidin'ny karazana asa
Hatramin'ny fiandohan'ny taona, ny ankolafy football dia ampahany lehibe amin'ny fiainan'i Mourinho. Ianao, nisy fanehoan-kevitra samihafa mikasika ny zavatra tian'ny ray aman-dreniny ho an'ny zanany manokana. Ilay reny manan-dreniny (Maria Júlia Carrajola dos Santos) dia nieritreritra fa ny zanany lahy dia tokony hifantoka tanteraka amin'ny fanabeazana mba ho lasa orinasa mahomby tahaka an'i dad dos Santos Snr.
Ny dadan'i Jose izay mpiambina nitifitra dia nanana fomba fijery samihafa. Nila ny zanany ho lasa mpilalao baolina matihanina izy. Tsy nila fotoana firy hiarahany amin'i Jose izy noho ny fanoloran-tenan'ny tanjona tao amin'ny renivohitra 'Porto' sy Lisbonne. Ny fampidiran-dresaka, ny fanoloran-tenan'ny Football any Porto sy Lisbon dia midika fa i Félix Mourinho matetika dia nisaraka tamin'ny zanany lahy. Ianao, ny tsy fisian'ny ampahany kely amin'ny rain'i Jose dia tsy namono ny nofiny. Na izany aza, io fisarahana io dia nanome an'i Maria Júlia Caramjola dos Santos ny toerany hanapa-kevitra ny hoavin'ny zanany. Izany no mahatonga an'i Jose hijaly amin'ny fomba fiainan'ny jadona.
Ny reniny dia nisoratra anarana tao amin'ny sekoly momba ny varotra, fa i Jose Mourinho kosa dia nandao ny andro voalohany nifanandrinany, niorina ny toerany ary nanapa-kevitra fa hifantoka amin'ny fanatanjahantena. Nifidy ny hanatrika ny Instituto Superior de Educação Física (ISEF), University University of Lisbon, izy mba hianatra momba ny siansa fanatanjahan-tena.
Ny fifantohanan'i Jose amin'ny siansa ara-panatanjahan-tena dia nametraka ny fototra ho amin'ny ankehitriny.
Jose Mourinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Taorian'ny dian'ny rainy
Mourinho na dia tamin'ny fotoana nianaran'izy ireo aza ny fandalinana ny fandaharam-potoana nandritra ny faran'ny herinandro, ary rehefa lasa mpanazatra ny dadany, dia nanomboka nandinika ny fotoam-pianarana i Mourinho ary nianatra ny nanala ny ekipa mpanohitra. Jose Mourinho dia te-hanaraka hatrany ny dian'ny rainy.
Ny rainy tamin'ny vao haingana Pollemma Manoratra izany ve ny miteny;
"Raha izy no 13 na 14 dia lasa mpitantana ary tsy maintsy nandeha. Hitady fomba hitondrana ahy foana i José na aiza na aiza misy ahy. Amin'ny mpanazatra, na koa fiara fitaterana fiara, dia miaraka amiko foana izy amin'ny lalao amin'ny faran'ny herinandro. Nanomboka nitantana ny ankizilahy baolina izy. Hametraka ny tenany eo ambadik'ilay banky izy. Nomeko torolalana izy mba handehanany amin'ireo mpilalao, mihazakazaka any amin'ny faritra ilan'ny tadim-peonao mba hilaza amin'izy ireo. Noho izany dia nanomboka aloha be izy mba hifanaraka amin'ny taktika sy ny rafitra milalao ...
Young Jose Mourinho sy ny rainy
Raha izy 15 na 16 dia nilaza tamiko izy fa te ho mpitantana. Nanomboka nijery ireo ekipa izay handeha hilalao sy hanomana tatitra izahay, ary nanampy ahy be dia be. Tsaroako fony aho mpitantana tao Uniao de Madeira ka nandeha nilalao tany Amadora izahay. Nilainay farafaharatsiny mba hanatratrarana ny lalao ho an'ny toerana ao amin'ny fizarana voalohany amin'ny Ligy Portiogey. "
Niditra tao amin'ny ekipa CF Os Belenenses i Jose taorian'ny fizarana fianarana. Tamin'io fotoana io dia nilalao baolina kitra niarahan'ny Os Belenenses sy Vitória de Setubbal ny rainy, nahazo vola iray ho an'i Portogaly nandritra ny asany. Nanomboka nanaraka ny dian-drainy i Mourinho tamin'ny alalan'ny fandraisany anjara tamin'ny baolina matihanina. Mpilalao izy fa tsy mpilalao baolina. Izy dia nilalao tao amin'ny Diviziona Faharoa Portiogey. Indrisy fa ny fifamatorany tamin'ny baolina matihanina dia feno fitsapana sy fahoriana.
Jose Mourinho ho mpilalao baolina kitra - Adihevitra amin'ny baolina matihanina
Jose Mourinho no nanao ny asany voalohany amin'ny baolina kitra ho an'ny Rio Ave ao amin'ny 1980. Eto i Mourinho dia nilalao ho Central Midfielder ary nanao ny ligin'i 16 ligy - tanjona roa.
Nandritra ny 21 taona, dia nifindra tany Sesimbra i Mourinho, izay nahitana ny ligin'i 35 ary nahatratra ny tanjona iray. Fihetsehana fohy hafa no nitarika an'i Mourinho ho Comércio e Indústria, izay nahitana ny ligin'i 27 ary nahatonga ny tanjona 8.
Jose Mourinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Tolona mba hiaina ny lova navelan'ny rainy
Ny fidiran'i Jose Mourinho tamin'ny baolina matihanina dia nolavina. Nanana fisotroan-dronono aloha izy rehefa avy nitsikera imbetsaka noho ny tsy fahampian'ny haingana sy ny hery amin'ny lalao. Raha tokony hanohy hijaly izy dia nisafidy ny hifantoka amin'ny ho lasa mpilalao baolina kitra. Ny fisotroan-drononony teo aloha dia nanamarika ny fiafaràn'ny ady amin'ny fiainana ny lova navelan'ny rainy amin'ny lalao iraisam-pirenena.
Jose Mourinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Fifandraisana eo amin'ny fiasa sy ny mpandika teny.
Nanomboka ny asany i Jose Mourinho tamin'ny fampianarana fampianarana ara-batana amin'ny endrika samihafa sekoly ary taorian'ny dimy taona, dia nahazo mari-pahaizana izy ary nahazo marika tsy tapaka nandritra ny dingana rehetra. Mourinho dia naneho ny talentany tamin'ny talentany niaraka tamin'ny fotoana fohy nahomby teo amin'ny Benfica sy União de Leiria, ka nahatonga azy ireo ho any amin'ny farany ambony indrindra amin'ny fifaninanana.
Taorian'ity fahombiazana fohy ity, dia nanohy fianarana fanampiny izy tamin'ny fanatrehana fiofanana fanampiny antokony izay neken'ny Anglisy sy Scottish Football Associations. Ny fahombiazany dia nahasarika ny mason'ilay mpitarika Ekosy teo aloha Andy Roxburgh. Nandinika ny fiara portogey tanora sy ny fiheverany ny tsipiriany izy.
Taty aoriana dia nikasa ny hanova ny anjara asan'ny mpanazatra amin'ny baolina kitra i Jose Mourinho amin'ny fampifangaroana ny teolojian'ny fiofanana miaraka amin'ireo fomba amam-panao sy fomba ara-psikolojika amin'ny fandikan-teny. Taorian 'ny fikolokoloana niasa ho mpitantana mpanampy sy mpanazatra ekipa tanora iray, tao 1992 dia nahita i Joe Mourinho niasa tamina mpandika teny ho an'i Sir Bobby Robson tao amin'ny Sporting Club Portugal. Rehefa nandeha tany Barcelone tamin'ny 1996 i Robson, dia nanaraka an'i Mourinho - nianatra teny Katalana ary lasa ampahany manan-danja amin'ny fametrahana.
Jose Mourinho mpandika teny
Izy koa dia mpanaraka an'i Bobby Robson ao amin'ny FC Porto tamin'ny Dec 1993. Nifandray tsara tamin'i Jose Mourinho avy amin'ny Bobby Robson sy i Robson ireo mpampiasa azy ireo ary nitoky tanteraka ny hevitry ny tanora Mourinho.
Nomena andraikitra amin'ny fitantanana ny ekipan'i Barcelona B koa i Mourinho, ary Barcelona A ho an'ny fifaninanana kaopy. Amin'ny maha mpitantana mpanampy azy, dia nampiofana ny sasany amin'ireo mpilalao tsara indrindra eran-tany toa an'i Rivaldo, Figo sy Guardiola ary Luis Enrique i Jose.
Porofo fa i Jose Mourinho dia nampiofana an'i Ronaldo Luís Nazário de Lima
Mahaliana ny mahafantatra fa i Jose Mourinho dia nampiofana an'i Pep Guardiola. Mbola mpanampy mpanampy izy raha mbola mpilalao baolina any Barcelona i Pep Guardiola.
Jose Mourinho nampiofana an'i Pep Guardiola tao Barcelona
Rehefa nandao ny klioba i Robson, dia nijanona i Mourinho, niasa tao amin'ny Louis Dutchman Louis van Gaal nandritra ny roa taona nahomby ho an'i Barcelona.
Jose Mourinho sy Louis van Gaal ao Barcelone.
Jose Mourinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Fiofanana ho an'ny tanora vao maraina
Naverin'i Jose Mourinho tany Porto tamin'ny fiandohan'ny 2002 ho mpanazatra ny lohany, nahazo ny Primeira Liga, Taça de Portugal ary ny UEFA Cup tao 2003. Tamin'ny vanim-potoana manaraka, nitarika ny ekipa i Mourinho mba handresy amin'ny Supertaça Cândido de Oliveira, an-tampon'ny ligy fanindroany, ary nahazo ny voninahitra ambony indrindra amin'ny baolina kitra Eoropeana, ny UEFA Champions League.
Mourinho amin'ny UEFA Champions League ny andro fankalazana ny FC Porto
Nifindra tany Chelsea i Mourinho ny taona manaraka ary nahazo ny loha laharana Premier League tamin'ny teboka 95 iray, ny lohatenin'ny liginy voalohany tamin'ny taona 50, ary ny Cup League tamin'ny fotoana voalohany.
Jose Mourinho ny andro malaza amin'ny Chelsea FC
Tamin'ny taona faharoa i Chelsea no nitazona ny Premier League ary tao amin'ny 2006-07 dia nandray ny klioba ho an'ny FA Cup sy League League double.
Mourinho no nandao an'i Chelsea tamin'ny volana septambra 2007, tao anatin'ireo tatitra momba ny fihantsiana nataon'ny tompon'ilay klioba Roman Abramovich. Tao 2008, nifindra tany amin'ny Club A Inter Milan i Mourinho. Tao anatin'ny telo volana dia nahazo ny voninahitra italiana voalohany izy, ny Supercoppa Italiana, ary nahavita ny vanim-potoana tamin'ny fandresena ny lohatenin'ny Serie A. Tamin'ny 2009-10, Inter no lasa klioba italiana voalohany nahazo ny kianja Serial A, Coppa Italia sy ny Ligin'ny UEFA Champions League, ary koa ny Inter no nahazo ny fifaninanana farany nanomboka ny 1965. Izy dia iray amin'ireo mpanazatra dimy ihany no nahazo ny ekipa Eoropeana tamin'ny ekipa roa samihafa, niaraka tamin'i Ernst Happel, Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes ary Carlo Ancelotti. Nahazo ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany ho an'ny taona FIFA voalohany amin'ny taona 2010 izy. Nanaovany sonia tamin'ny Real Madrid tao 2010 izy, nandresy ny Copa del Rey tamin'ny fotoana voalohany. Ny taona nanaraka, nandresy ny La Liga izy ary nanjary mpanafatra fahadimy, taorian'ny Tomislav Ivić, Ernst Happel, Giovanni Trapattoni ary Eric Gerets, nahazo ny ligy ligy any amin'ny firenena efatra farafaharatsiny: Portugal, Angletera, Italia ary Espaina.
Taorian'ny nandaozany an'i Madrid tamin'ny 2013 tamin'ny volana jona, dia niverina tany Angletera i Mourinho mba hitantana an'i Chelsea tamin'ny fanindroany faharoa, nandritra ny nandreseny nandritry ny liginy hafa, saingy nopotehiny tamin'ny 17 December 2015, taorian'ny nahavitan'ny vokatra mahantra an'i Chelsea teo ivelan'ny faritra fihodinana.
Taorian'ny volana maromaro taorian'ny lalao faharoa taorian'ny nahafatesan'i Chelsea ny asany, dia nohamafisin'i Mourinho ho mpitantana vaovao ao Manchester United ny 27 May 2016.
Noho ny fahaiza-manaony ara-pihetseham-po, ny toetra maha-olona (nefa tena mampiady hevitra ihany koa) sy ny fanoheran'ireo mpanohitra azy amin'ny fiatrehana ny vokatra amin'ny lalao baolina mahafinaritra, dia matetika izy, izay samy mpankafy sy mpitsikera, no mpandimby an'i Helenio Herrera.
Jose Mourinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Nanambady an'i Jose Mourinho hatramin'ny 1989. Nanambady an'i Matilde "Tami" Faria, tovovavy namany izy. Nanomboka nampiaraka tamin'ny zatovo tao Setúbal, Portugal izy ireo. Ny ray aman-dreniny dia niteraka azy tany Angola fony izy niasa toy ny mpiasa mpanampy tao amin'ny firenena.
Tsy maintsy nandeha tany aminy i Jose noho ny fanabeazana feno fanetren-tena. Matilde dia fantatra fa manaja, manaiky, manosika ny tenany ary tena manan-danja. Mandany fotoana maro manome aina izy maha-olona serivisy ho an'i Afrika.
Izy no anton'ny fitiavan'i Jose Mourinho an'ireo mpilalao baolina Afrikana sy ny asa soa ho an'ny Afrikana.
Ny zanaka voalohany, Matilde zanany, dia teraka tao 1996 ary izy ireo dia nanana ny zanany lahy voalohany, José Mário, Jr. (izay milalao baolina ho an'ny ekipa tanora ao Fulham FC), efa-taona aty aoriana.
Mourinho, izay nanolo-tena ho an'ny baolina kitra, dia mamaritra ny fianakaviany amin'ny maha-ivon'ny fiainany azy ary nanamarika fa ny "zavatra manan-danja indrindra dia ny fianakaviako ary ny maha-ray be fitiavana." Izy dia nofinofy ho ny Lehilahy Newman ny taona 2005 ary nofaritana tahaka ny lehilahy natokana ho an'ny fianakaviany sy ny asany. Tamin'ny fiafaran'ny 2011, i Jose Mourinho dia nantsoina hoe 'Rockstar of the Year' tamin'ny famoahana Espaniola ny gazetiboky Rolling Stone ary nasongadina teo amin'ny fonony fanokafana ny andiany tamin'ny Desambra.
Jose Mourinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa - Fangataham-panafody miafina
Nosazina i J. Mourinho tamin'ny fotoana niainany niaraka tamin'ny tompom-paty mendri-piderana, Elsa Sousa tao ambadiky ny vadiny nandritra ny roa taona.
Ny fiampangànana miafina ao Mourinho
Araka ny sgforum ny tatitra, Mourinho, nifanena tamin'i Elsa blonde nandritra ny fiofanana ekipa kely ao an-tanànan'i Leiria any Portogaly. Nentiny tany aminy i Porto Porto, ilay asa lehibe voalohany nipetrahan'ny mpivady nandritra ny valo volana tao anaty efitrano nokarakarain'ny klioba. Mourinho dia nampiditra azy ho vadiny ho an'ireo mpilalao FC Porto sy ireo mpilalao. Raha nanao izany izy dia nipetraka tao amin'ny tanànan'i Setabul, Matilde tena izy, niaraka tamin'ny zanany vavy, antsoina koa hoe Matilde sy ny zanany lahy Jose Junior.
Voampanga ho nandroaka azy tamin'ny fanomezam-pahasoavana ny lehiben'ny blues taloha ary nilaza taminy fa izy no tena fitiavana marina. Ny fiheverana fa ny vadin'i Jose vadiny dia tonga tampoka rehefa tonga ny tena vadin'i Mourinho. Ny vadiny Matilde, izay nanambadiany tao 1989, dia tsy nahafantatra fa niaina fiainana indroa izy.
Jose Mourinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Momba ny bokiny controversy
Nandresy ny faharesena ivelan'ny baolina kitra tao amin'ny 2004 i Mourinho. Boky mitondra ny lohateny hoe Jose Mourinho - Made in Portugal:
Ny bokin'i Jose Mourinho
The Official Biography ny mpanao gazety portogey Louis Lourenco, dia mpividy tsara indrindra ao amin'ny firenena, na dia niezaka ny hampitsahatra ny famoahana azy amin'ny voalohany aza ny mpitantana ny portogey.
Ny boky dia naneho ny fianakavian'i Mourinho sy ny tahony azy. Ilay boky dia nankasitraka ny fahaizany mandika ny teny portio izay milaza ny fahaizany miteny Portigey, Anglisy, Espaniôla, Katalana, Italiana ary Frantsay.
Ianao, izy koa dia nanipika ireo olona izay mbola niantso azy ho mpandika teny tsotra izay nahazo andraikitra.
Jose Mourinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Fanampiana mahaolona
Niantso ny FA ny solontenan'i Chelsea José Mourinho mba hanomezana fanampiana ho an'ny fiantrana izay sazy ara-baolina fandoavam-bola izay mbola tokony handoavana ny trangan-javatra mety hitranga any aoriana. Ny fiantrana eto dia midika hoe manome fanampiana ho an'ireo tsy manan-kialofana any Afrika.
Jose Mourinho, mpanolotra fiantrana Self Styled
Raha tokony hijery ny Fiadiana ny amboara eran-tany 2014 any Brezila tamin'ity fahavaratra ity i Mourinho, dia nandany fotoana hitsidihana ankizy noana sy marary VIH any Côte d'Ivoire. Nomena andraikitry ny masoivohon'ny Firenena Mikambana ho an'ny Fandaharan'asa momba ny Sakafo eran-tany izy.
Ny asan'ny Jose Mourinho Humanitarean dia miasa ho an'i Afrika
Tao amin'ny 2005, i Mourinho dia nanome baoritra hividy mivarotra mba hanampy amin'ny fanangonam-bola ho an'ny fanampiana Tsunami sy ireo asa soa hafa. Ny mpikarakara Marc Thompson dia nanambara fa ny mpihaino iray dia nandoa vola 25,800 ho an'ny palitao Mourinho amin'ny mpikarakara vola ao amin'ny Stamford Bridge. Ny fantsom-bokatr'i Jackie Mourinho dia nanampy ampahany amin'ny £ 545,000 noho ny antony.
Ny vadin'i Mourinho dia manampahaizana manokana ary nivezivezy manerana izao tontolo izao mba hanampiana ireo mahantra ao amin'ny fiarahamonina amin'ny fampiharany ny hanoanana. Jose Mourinho, ny vadiny sy ny ankizy dia nandeha tany amin'ny Côte d'Ivoire mba hanamarina ny haavon'ny fahantrana any.
Jose Mourinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Fiaraha-miasa amin'ny polisy
Tao amin'ny 2007, navoakan'i Mourinho fampitandremana ny polisy taorian'ny fandàvany fa tsy navelan'ny polisy hikarakara ny alika biby, Leya. Nanafaka ny tranon'izy ireo avy amin'ny fombafomba fankalazana taorinan'ny fialan-tsasatra tamin'ny vadiny izy, ilay mpanafatra Chelsea avy eo dia namoaka ilay biby teo am-pelatanan'ny mpiasan'ny fahasalamana ary namporisika azy handositra ny làlana, araka ny vavolombelona nahita maso.
Nahoana no nosamborina ny alika Jose Mourinho (Leya)
Takatr'ilay manampahefana ny hanamboarana ny alika, satria nino fa nentina tany ivelany izy ary nentina niverina teto Grande-Bretagne tsy misy vakansy.
Nahazo fampitandremana i Mourinho noho ny fanakanana ny manampahefana tsy hanao ny asany. Ilay alika biby kely mahantra, Leya dia nosamborin'ny polisy avy hatrany.
Ireo mpanohana an'i Angry Chelsea tamin'ny andron'ny lalao manaraka dia naneho hevitra tamin'ny fametrahana sora-baventy mampiseho 'Tsy manan-tsiny' ny alika Jose. Tsy nanenina velively izy ireo tamin'ny fangatahana ny famotsorana azy avy hatrany.
Ireo mpankafy Chelsea mangataka ny hamoahana an'i Leya
Ny hetsi-panoherana notohizan'izy ireo dia nitarika ny manampahefana hanova ny sainy sy hamotsorana an'i Leya mahantra.
Jose Mourinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -fivavahana
Ny finoana Ara-pinoana Jose Mourinho
Mourinho dia Katolika nafana fo amin'ny finoana. Izy dia natsangana ho toy izany (toy ny mahazatra amin'ny portiogey) ary manome ny fahombiazany amin'ny baolina kitra mankany amin'Andriamanitra sy ny finoany:
'Mivavaka be aho. Katolika aho, mino an'Andriamanitra aho. Miezaka ny ho lehilahy tsara aho mba hahafahany manana fotoana kely hanomezana tanana ahy rehefa mila izany aho.
Mourinho dia matetika lohahevitry ny fifandirana sy (mety diso) media. Nolazaina indray fa fony izy nitantana ny toerany tao Real Madrid, dia nitady ny torohevitra sy ny tsodranon'ny mpitsabo mpitsikilo Kenyana izy, ka namaly ny solontenany hoe:
'Katolika lehibe i José Mourinho ary mino an'Andriamanitra. Amin'ny raharaha mahakasika ny fiainany matihanina, mino ny asa mafy izy fa tsy amin'ny fahagagana nataon'ireo mpanao majika taloha ".
Na dia izany aza, mety misy ny sasany tsy manaiky fa ny asa mafy rehetra nataon'i Mourinho dia asa mafy. Heverina ho toy ny fifehezana ny mpilalao ao amin'ny ekipany izy.
Ny portioge portogey dia nanova ny tanany ho filma izay ahafahany mandray ny Papa.
Jose Mourinho hiasa an'i Francis Francis amin'ny horonan-tsary an-tsary
Ny biraon'i Chelsea Boss teo aloha dia nanaiky ny fifanarahana mba hampandrenesana ny feony amin'ny toetran'i Papa Francis ao anaty horonan-tsary iray noho ny famotsorana azy ao amin'ny 2017 noho ny taonan'ny fahitana an'i Maria Virjina tao Fatima, Portugal.
Mourinho dia ny feon'ilay pontifin'i Arzantina amin'ny teny Portiogey, Anglisy, Espaniôla ary Italiana - "ny tenin'ireo firenena izay efa (Mourinho) efa lasa tompondaka", hoy ilay orinasa portiogey Imaginew.
Ny fampiasana an'i Mourinho ao amin'ny sarimihetsika an-tsary dia "efa nahazo alalana tamin'ny Vatikana", hoy ny orinasa mpamokatra vokatra.
Jose Mourinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Avy amin'ny tranon'ny mpanankarena iray
Jose Mourinho sy Dadabe Felix Mourinho- Ny fianakaviana marefo
Manan-talenta be i Jose Mourinho ary manana ny tsenany amin'ny tontolon'ny baolina kitra sy fivarotana fivoriambe. Ny fianakavian-dreniny no namatsy vola ny kianja baolina kitra Vitória de Setúbal androany ao an-tanànany ao Portiogaly.
Ny fomba nanampian'i Jose Mourinho Family tao amin'ny fananganana kianja
Ny dadatoany no namatsy vola ny fanorenana kianja kianja Itória de Setubal tamin'ny fiandohan'ny 70s. Na izany aza dia nahatsikaritra fa ny fihemoran'ny fitondran'i Estado Novo an'i António de Oliveira Salazar tamin'ny volana Aprily 1974 dia niantraika tamin'ny raharaham-barotra raha toa ka very ny ampahany tamin'ny fampiasany.
Jose Mourinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Fifandraisana amin'ny ankizy
Sarin'i Jose Mourinho sy ny zanaka, Matilde
Mourinho sy ny zanany vavy Matilde no malaza indrindra amin'ny fianakaviany. Fantatra amin'ny lozam-piaraha-monina any Londres izy miaraka amin'ny sasany amin'ireo kintana lehibe indrindra manerantany, anisan'izany ny Haran-n'i Direction.
Ny zafikelin'i Jose Mourinho dia nanasonia fanadinana roa taona niaraka tamin'i Fulham.
Jose Mourinho sy ny zanaka, Jose Mario Mourinho Jr.
Izy no mpiandry fitia ary nilalao tao amin'ny elatry ny tanora Chelsea sy Real Madrid izay nampiofana ny rainy indray mandeha. Ny faniriany ny nofinofiny izay tsy vitan'ny rainy no nataony ho an'ny raibeny.
Jose Mourinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Tatoo Facts
Ny taktika Portiogey dia nahazo ny tatoatany tamin'ny taona 50, ary mahagaga fa tsy misy ifandraisany amin'ny baolina kitra.
Mourinho dia nandoa vola £ 80 noho ny tatoazy izay mampiavaka ny anaram-paty Matilde Faria sy ny zanany.
Mankasitraka ny fahombiazany amin'ny mpanazatra baolina kitra izy ho an'ny fanohanana nomen'ny fianakaviany azy. Ny tatoazy dia tsy hita amin'ny maso matetika satria ny ranomainty dia eo amin'ny sandriny, izay matetika izy no mitazam-pijery.
Jose Mourinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Lalàna fandaniana
Niaina ny ankamaroan'ny fiainany teo ivelan'ny tranony manokana izy ary nijanona tao an-trano, na dia nitaraina taminy aza izy noho ny nijanona tao amin'ny fianakaviany nandritra ny fotoana rehetra. Vao tsy ela izay dia nahazo trano iray mendrika ny tranoben'ny 3.9million eo an-dalantsara eo ivelan'ny tanànan'i Puthin, izay lalana iray ora avy ao Manchester.
Sarin'i Mourinho's Mansion any Pays de Galles
Ny trano dia toa zato taon-jato saingy raha ny marina dia iray amin'ny trano maitso indrindra ao amin'ny ala kely ny 39years taloha vita vita tamin'ny fanolorana fantsona iray ety ivelany sy ny famaratra roa.
Manana dragona matanjaka malemy izy, izay mirehitra afo rehefa mivoaka ny vavahady mitondra fiara. Ny trano dia avo efatra heny noho ny tranon'ny Mourinho any Londres. Manana fanangonana fiara maro i Jose Mourinho, ka ny ankamaroany dia novokarin'i Audi, Porsche, Aston, martin ary Ferrier.
Jose Mourinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Nanafina tamin'i Eva Carneiro
Mpanao dokambarotra mpilalao Chelsea, Eva Carneiro, sy ny dokotera club Jon Fearn, niantso azy ireo ho 'naive' taorian'ny nandosirany teny amin'ny kianja mba hitondràna loza voajanaharin'i Eden
Io no nahatonga ny dokotera Chelsea teo aloha, Eva Carneiro nametra-pialana tamin'ny fialany avy tao amin'ny klioba taorian'ny fipoahan'ny oniversite avy tany Mourinho, 53 taona, izay nolazainy fa nantsoiny hoe "zanakavavin'ny vehivavy janga" iray amin'ny teny portogey.
Niforonan'i Eva Carneiro i Jose Mourinho
Rehefa avy nandao ilay klioba izy dia nameno fanavakavahana amin'ny fanavakavahana mikasika ny Club sy Mourinho izay araka ny voalaza Mirror dia mihoatra ny £ 1.2m. Talohan'ny fisotroan-dronono, i Eva dia voarara avy eo amin'ny sehatra ekipa voalohany ary nesorina hiasa amin'ny ekipa vehivavy avy amin'i Jose Mourinho.
Chelsea FC sy Jose Mourinho dia faly nanapa-kevitra ny handefa ilay tranga ary niala tsiny taminy "tsy misy famerenana azy sy ny fianakaviany noho ny fahavoazana niteraka." Ny roa tonta dia nanaiky ny fanararaotana goavana ho an'ny minisitry ny dokotera taloha talohan'ny nahatonga azy ireo ho porofo mitatao ho azy ireo hivoaka ho an'ny daholobe.
Carneiro dia namoaka fanambarana manokana, naneho ny alahelony tamin'ny famahana ny raharaha.
"Fotoana tena sarotra sy mampahonena ho ahy sy ny fianakaviako ary manantena aho izao fa handroso miaraka amin'ny fiainako", hoy izy.
As DailyMail nitatitra; Jose Mourinho tamin'ny faran'ny tranga dia nilaza fa namadika ny klioba i Dr Carneiro, tsy niraharaha ny torolalany tamin'ny fitsaboana an'i Eden Hazard teo an-tampon-doha ary noana loatra noho ny lazany izay nanonofy azy hipetraka any aoriana any amin'ny fahitalavitra.
Jose Mourinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Namoy ny ain'i Rafa Benitez
Rafa Benitez's Ny vadiny dia nananihany indray mandeha fa nandao ny asany ny vadiny tamin'ny alàlan'ny fiaramanidina Jose Mourinho. Notenenina izany rehefa voatendry ny vadiny Real Madrid. Tonga ihany koa izy taorian'ny nahitan'i Benitez ny fiampangana ekipa fahatelo izay notarihan'i Mourinho teo aloha.
Ny Jose Mourinho dia novonoina niaraka tamin'ny vadin'i Rafa Benitez
Jose Mourinho anefa, namoaka valiny mahatsiravina tamin'ny vadin'i Rafa Benitez taorian'ny nanambarany ny lehiben'ny Real Madrid dia "mitory ny hafany" foana.
The ex-Chelsea boss Hoy izy: "Raha mikarakara ny sakafon'ny vadiny izy, dia tsy ho ela dia hiresaka amiko."
Jose Mourinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Miasa ho toy ny mpandositra
Nolazain'i Mourinho tao amin'ny efitrano fandroahana Chelsea tao anaty harona fanasan-damba nandritra ny fifandonana Eoropeana niaraka tamin'i Bayern Munich, fony izy nanao fanakanana an-tserasera.
Jose Mourinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -The Antagonizing One
Saripikan'i Jose Mourinho mankalaza ny hadisoan'i Steven Garrard
Nankalaza ny tanjon'i Steven Gerrard ao amin'ny 2005 Carling Cup farany amin'ny fihazakazahana eo amin'ny lahatsary manoloana ny mpankafy Liverpool manamboatra ny 'fanakorontanana' amin'ny rantsan-tànany amin'io loha io.
Jose Mourinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Ilay Mahasosotra
Ny fifandonana teo amin'i Jose Mourinho sy Arsene Wenger dia anisan'ireo fiaramanidina indrindra teo amin'ny Ligue Premier.
Ady teo anelanelan'i Jose Mourinho sy Arsene Wenger
Nantsoin'i Jose Mourinho antsoina hoe 'Arsene Wenger ho' manampahaizana manokana amin'ny tsy fahombiazany tamin'ny febroary 2014 izy, niaraka tamin'ny lehiben'ny Arsenal, izay nanamarika ireo 'fanonerana' ho an'i Chelsea sy Mourinho.
Jose Mourinho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Ny Medaly-Nandatsaka iray
Nandresy lahatra ny medaly nahazo ny ekipa Premier League ho an'ny Chelsea tany amin'ny vahoaka Chelsea izy, ary rehefa nomena ny iray hafa avy amin'ny FA izy, dia nanipika izany ho an'ireo mpanohana ihany koa.
Jose Mourinho - Ny medaly manapaka iray
Nilaza i Mourinho fa ny 'medaly dia ho an'ny rehetra'.
tranainy Ny ankamaroany nifidy
Muito bom, Traça vida de Mourinho desde criança. Tsara ny manamarika ny momba an'i Jose Mourinho toy ny lehiben'ny mpanazatra
Jesse Lingard tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola fantatra